Project Opensky 777 jeeda dhibaato swich qabsaday.
Su'aal Project Opensky 777 jeeda dhibaato swich qabsaday.
1 sano 8 bilood ka hor #662 by ricsmi
Dejisan iyo duulay maanta Project Opensky Boeing 777 iyo diyaarad la jecel yahay, dhibaatada kaliya ee aan isagoo waa in uusan swich heaading dhufayskii muuqato in ay ka shaqeeyaan.
pilot auto Set in on sida caadiga ah oo dhigay cinwaanka aad rabto ka dibna riix swich qabtay sida aad doonaynin in diyaarad kale, laakiin waxa kaliya quful on koorsada hadda halkii, waxaan isku daynay cayn kasta laakiin waxa had iyo jeer sameeya wax la mid ah .
Fikrado guys, waa kutaan ama lay i kaliya samaynayaan qalad?
1 sano 8 bilood ka hor #664 by ricsmi
Ok ayaan kinda u baxay tirada, muuqato i baahan tahay in ay isticmaalaan trhe NAV Select button, aan soo qabanaynin oo NAV ah, wax kaliya waa macbudka dooro badhanka kaliya ka shaqeeya qol 2d oo i taagan iyocadhadii la isticmaalayo.
Sidaas daraaddeed i dib doonaa su'aasha aan, qof ogaado haddii ay suurogal tahay in bedelan button NAV qabtay ee qol 3d si NAV badhanka dooro halkii?